Güzelyalı 19/1 Wadada Wadooyinka Oo Loo Furay Gaadiidka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirGüzelyalı 19/1 Wadada Wadada ayaa loo furay Gaadiidka
17 / 02 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, TURKEY
wadada wadada loo yaqaan 'guzelyali waddo' ayaa loo furay taraafikada
Maamulka Magaalada İzmir polZSir Maareeyaha Guud completedZSU wuxuu dhameystiray howlihii wadooyinka Güzelyalı 19/1, kaas oo isku xira Mithatpaşa Street iyo Mustafa Kemal Sahil Boulevard, wuxuuna furay wadada taraafikada. Dadka daggan gobolka ayaa ku faraxsan shaqada iyo howsha goor hore la qabtay.
Maareeyaha Magaalada Magaaladda Izmir İZSU Agaasinka Guud wuxuu ka saaray biraha birta jidka halka Polygon Stream ay kula kulanto badda sababaha ay ku abuureyso qatarta baabuurta waxayna sababtaa wasakhowga buuqa. Marka la eego baaxadda hawsha dayactirka, xargaha birta ee Güzelyalı Mahallesi 19/1 Sokak (u bixida Mustafa Kemal Sahil Boulevard oo loo maro Wadada Mithatpaşa) ayaa la daadgureeyay. Isagoo sheegay in boorarka ku xiraya birmadka birta ee gidaarka wabiga ay sababaan buuq inta lagu gudajiro gawaarida waaweyn ee culus, saraakiisha İZSU waxay cadeeyeen in dhawaqa iyo halista suurta galka ah laga hor istaagay qaadida xamuulka.
Kooxo UZSU ayaa daboolka ka qaaday wadada laamiga ah ee 95-mitir ah. Markii la dhammeystiro shaqooyinka asphalting ee Wasaaradda Sayniska, wadada waxaa loo furay taraafikada gawaarida. Howlaha dayactirka, oo la qorsheeyay in lagu soo gabagabeeyo labo bilood, ayaa lagu soo gabagabeeyay wax aan ka badneyn 21 maalmood.
Muwaadiniinta ku nool gobolka ayaa ku qanacsan mashruucan. Fuat Karadeniz, oo ku noolaa magaalada Güzelyalı 21 sano, ayaa yiri, "Waqtiyadii la soo dhaafay, waxaan sameyneynay qeylo badan sababtuna tahay biraha birta ah. Waxa kale oo jiray cabashooyin badan oo ka yimid deriskeena oo fadhiya dhismayaasha. Shaqada hadda waa mid aad u wanaagsan. Waxaan uga mahadcelineynaa degmada Metrozmir Degmooyinka Waaweyni adeegyadeeda. ” Ayşegül Taşbaş, oo ka mid ah dadka deggan gobolka, ayaa yidhi, "Anigu waxaan joogaa goobtayda shaqada ee Güzelyalı waxaanan u adeegsadaa wadadan si joogto ah. Suuragal uma aheyn aniga inaan dhex maro ciribta. Sidoo kale, buuqa ayaa la baabi’iyey. Waxay ahayd shaqo aad u wanaagsan. ”Wuxuu muujiyey inuu ku qanacsan yahay. Zeren Çelebioğlu, oo ka shaqeeya Güzelyalı, wuxuu qiimeeyay shaqooyinka sida soo socota: “Waxaan halkaan joognaa muddo hal sano ah oo Gızelyalı, xafiiskayaga. Waxaa nagu adkaaneynay inaan ka gudubno dadka lugeynaya wadada waddo-qaabeeya. Waxaa na soo maray xoogaa dhibaatooyin ah markii aan gudbay xayawaannada. Dhowr dhibcood, waxaa jiray meelo aan ka gudbi karno oo keliya. Waxaa jiray kuwa iyagu xitaa alaabtooda ku tuuray foornada. Aad ayaan ugu faraxsanahay in jidkan loo habeeyay. Dhibaatooyinkeenii hore ayaa la waayey ”.
Warshadaha Eskisehir ayaa lagu xidhay gaadiidka waddooyinka
Goobjoogta 99 / 1 ee loogu talagalay tareenka munaasabadda ah ayaa lagu xiray gaadiidka
Waddada Bursa-Ankara ayaa loo furay gaadiidka
3. waddada gaadiidka biriga ah ayaa loo furay gaadiidka
Dekedda Newly Road ee Dekedda leh ee 8 Lane oo loo Bixiyay Gaadiid
Ogeysiiska Qandaraaska: TÜVASAŞ Dib-u-Celinta Iftiinka Deegaanka iyo Dariiqa